တရုတ်သထေးလူယုံ ကြေးမုံဂျီး သိဈေယံ notice | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » တရုတ်သထေးလူယုံ ကြေးမုံဂျီး သိဈေယံ notice
တရုတ်သထေးလူယုံ ကြေးမုံဂျီး သိဈေယံ notice
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 23, 2012 in Opinions & Discussion |9comments
အမိမြန်မာပြည်ဂျီးမှာ ဂေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်နေဒဲ့ တရုတ်စက်ရုံအကြောင်း လမ်းကြုံလို့ တရုတ်သူလျှို ပစ္စည်းမဲ့ဝါဒီ (ဘဏ်ထဲမှာဒေါ့ ဒေါ်လာသန်းချီရှိသဒဲ့) ကြေးမုံဂျီးရဲ့ “စီအိုင်အေ CIA နဲ့ ”ဝီးကီး” စွယ်စုံ (Wikipedia) တို့ မြင်တဲ့ South Korea ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေး III” ပို့စ်မှာ ဆိတ်ရင်းစေတဏှာနဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ မှတ်ချက်ပေးမိဒေါ့ သူဂ ခုနှစ်အိမ် ရှစ်အိမ်ဂျား ကက်ကက်လန် ရန်စဂါး ဂလိုဆိုဒယ် “Kyaemon says: သမတသိန်းစိန်က ဘိတ်ခေါ်နေတယ် မဟုတ်လား၊ ပညာအတွေ့အကြုံ ငွေအရင်းအနှီး ဗဟုသုတ အမြော်အမြင် လဲစုံ ပြိဘဲ စေတနာ မေတ်တာ ရှိရင် မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး၊စက်ရုံ အလုပ်ရုံ သွားထောင်ကြပေါ့ဗျာ၊ လူတွေလဲအလုပ် ရကြမယ် ပညာလဲရကြမယ် မဟုတ်လား အဝေးကနေပြီး သူများကို လိုက်ဝေဖန်နေတာ ဘာအကျိုးရှိမလဲ?” (ကြေးမုံဂျီးပုံ)
အဲဒါနဲ့စပ်လို့ အာဏာရှင်စနစ်၊ အမျိုးသားရေးဝါဒဂို ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များထက် နှစ်သက်သူများရဲ့ ယေဘူယျ လက္ခဏာတခုဂို ဖောက်သည်ချ ပါရဈေ။ တနည်းဆိုသော် တင်းကျပ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို လိုလားသူများနဲ့ ပွင့်လင်းလူနေမှုစနစ် ထောက်ခံသူများအကြား အခြေခံ တွေးပုံခေါ်ပုံ ကွဲပြားဂျက်လို့လည်း ပြောယင်ရသယ်။ စစ်တပ် တိုင်းပြည်အာဏာ မတရားယူထားတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် သူတို့စွမ်းလို့ယူဒါ မင်းတို့လည်း အစွမ်းရှိရင် ရအောင်ယူလို့ ပြန်ပက်လေ့ရှိဒယ်။ စစ်အုပ်စုဝင်များအတွက် အာဏာ သေနတ်ပြောင်းဝဂ ထွက်သည်ဆိုတဲ့ တောတွင်းဥပဒေသည် အမှန်တယား… :cool: (ကြေးမုံဂျီးအဘေး အာဏာရှင် မော်စီတုံး)
သူ့တို့အမြင်အရ တရားမျှတမှု လွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတာတွေသည် အပေါ်ယံစဂါးလုံး၊ လူတိုင်းရရင် ယူမှာပဲ။ မစားရလို့ စပျစ်သီးချဉ်နေဒါ။ စီးပွားရေးလည်း ဒီသဘောပဲ၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ဘာညာ လာမရှုပ်နဲ့၊ ကျေနပ်ရင်လုပ် မကျေနပ်ရင် မလုပ်နဲ့၊ ငကန်းသေ ငဆွေလာမယ်၊ လုပ်ချင်သူတွေ တပုံဂျီးဆိုတဲ့ ၂၀ရာစု အရင်းရှင်ဝါဒီ အတွေးအခေါ်ကို ကိုင်ဆွဲဒယ်။ မေးပါရစေ ကြေးမုံဂျီး… ယနေ့ခေတ် သာမာန်ရပိုင်ခွင့် ဖြစ်နေတဲ့ တပတ်နာရီ၄၀ အလုပ်ချိန်၊ အချိန်ပိုကြေး၊ (ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ အိုနာရံပုံငွေ၊ ပင်စင်လစာ) တို့ဆိုတာ သမိုင်းမှာ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပေးလို့ ရလာတာလား၊ အလုပ်သမားအရေး တိုက်ပွဲဝင်မှုများရဲ့ အသီးအပွင့်လား။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဂေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်နေဒဲ့ တရုတ်ကူမြူနစ်ကြီးလို ငါ့စဂါးနွားရ မပေါဘာနဲ့ ကြေးမုံဂျီး။ :mad: (အဖိနှိပ်ခံ စက်ရုံအလုပ်သမားများ၏ ခံစားဂျက်)
အလုပ်ရှင်ဖက်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ မတတ်နိုင်ရင် မတတ်နိုင်ဘူး ကျေကျေလည်လည် ပြောပါ။ ဝင်ငွေနဲ့အမြတ်၊ အသုံးစားရိတ် ၊ အဲဒီထဲဂမှ အလုပ်သမားခ ဘယ်လောက်ကုန်နေသလဲ ဖွင့်ပြလိုက်ပါ။ ရှုံးဒယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်တုန်းကထဲဂလည်း။ ပြီးခဲ့ဒဲ့ ဆယ်နှစ်ဆက်တိုက်မြတ်ပြီး ဒီနှစ်ကြမှရှုံးတာ လာမငိုနဲ့။ အခြားဖော်ပြလို့ မရဒဲ့စရိတ် ကျွေးမွေးပေးကမ်းရဒါတွေ ရှိဒယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်လဲ။ ဖြစ်သင့်ဒဲ့ပမာဏဆို လက်ခံဂျမှာပါ။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ အလုပ်သမား ခံစားရမည့် ဝေစုထဲဂ ထိုးကျွေးတာ ဆိုရင်တော့ ပြသနာရှိနေပြီ။ ပင်လယ်ရပ်ခြားမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နည်းပညာ ဘက်ပေါင်းစုံဂ တွက်ချက်ပြီးမှ လိုအပ်လို့ ဒါမှမဟုတ် ပြည်တွင်းထက် ပိုကိုက်လို့လုပ်တာ။ အစိုးရမူဝါဒ အပြောင်းအလဲဂို ထင်မထားဘူးဆိုရင် အတွက်မှားလို့ ခံပေဒေါ့။ အနောက်နိုင်ငံ ကော်ပိုရေးရှင်းတွေ လက်ရှောင်ဂျစဉ် အခွင့်ဂေါင်းယူသူများ ရေစုန်မှာ မျှောတုန်းဂဒေါ့ တဟီးဟီးနဲ့ ရေဆန်တွေ့ဒေါ့မှ မြစ်ရေကို အပြစ်တင်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား။ (ကြေးမုံအမျိုး တရုတ်ကြီးဖြစ်နေပုံ)
မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ငတ်လို့တောင်းဆိုနေတာ၊ အနောက်နိုင်ငံမှာလို အလုပ်ရှင်ကို လည်ပင်းညှစ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပြောရရင် အဲဒီနိုင်ငံဂ အလုပ်သမားတွေ ၂၀ရာစု စက်မှုတော်လှန်ရေးဒုံးဂ တောင်းဆိုတဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိသေးဒယ်။ အလုပ်ရှင်များ မကြောက်ပါနဲ့၊ အလုပ်သမားတွေဂ အလုပ်ပြုတ်မှာ ပိုကြောက်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ ရွှေခွက်ပျောက်တာဆိုရင် သူတို့ဂ ထမင်းခွက်ပျောက်မှာ။ :neutral: (တယားဥပဒေ)
ကျေးမုံဂျီးဒို့ အမျိုး ဘောစိဒွေဂိုမုန်းဒယ်..
အမင်မဒန် ဂေါင်းမာဒဲ့ကောင်ဒွေ..စက်ရုံပိုင်ရှင်ဒွေ (မပူးခ်ျ မပါ)..အလုပ်ရှင်ဒွေ..တစ်ဘက်စောင်းနင်းကောင်ဒွေ
ကျန်တာကို မိုက်ကယ်ကျက်ဖင် ဆက်ပြောလိမ့်မယ်.ဒါဘဲ.
မပူးခ်ျ က စကတ်ထရီ ငှားမလို့ တဲ့ ။ အဲဒါ ဂေဇက်က လူ ကို အူးစားပေးမယ်တဲ့ ။ ဆိတ်ဝင်လစားရင် ရှောက်ကြည့်ပေါ့ ။
ခု တစ်ခါ အလှည့်ကျတာကတော့ မိုက်ကယ်ကျက်ဖင် အလှည့်ပါရှင်…
ကိုဘလက် စကားငှားသုံးပြီး လက်မအကြီးကြီး ထောင်သွားပါတယ်ဗျာ..
ကိုအမတ်မင်းရေ. ကိုဘလက်ချော တစ်ယောက် ပျောက်ဆိုဗျာ. ရွာတံခါးစောင့်
@အူးကြောင်ရေ တော်သေးတာပေါ့ ကယားမဟုတ်တဲ့ တယားဥပဒေကြောင့်။
“”ခင်ဗျားတို့ ရွှေခွက်ပျောက်တာဆိုရင် သူတို့ဂ ထမင်းခွက်ပျောက်မှာ။ (တယားဥပဒေ)””
အားပေးပါတယ် …..very good ..
မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ငတ်လို့တောင်းဆိုနေတာ၊ အနောက်နိုင်ငံမှာလို အလုပ်ရှင်ကို လည်ပင်းညှစ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပြောရရင် အဲဒီနိုင်ငံဂ အလုပ်သမားတွေ ၂၀ရာစု စက်မှုတော်လှန်ရေးဒုံးဂ တောင်းဆိုတဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိသေးဒယ်။ ….
မီးဒုတ် မီးဒုန် ရှို့ ရှို့..